यो एक स्थानीय नेटवर्क वा इन्टरनेट मा एक निर्दिष्ट कम्प्युटर संग संचार नियन्त्रण को लागी एक सानो र उपयोगी कार्यक्रम हो। नियन्त्रण निर्दिष्ट कम्प्यूटर को आवधिक पिंग मा समावेश गर्दछ। पिङ परिणामहरू तथ्याङ्क विन्डोमा प्रदर्शित हुन्छन्: स्थिति - अनुरोध को वर्तमान प्रतिक्रिया; अनुरोधहरू - अनुरोधहरूको कुल संख्या; हराएको - हराएको अनुरोधहरूको...
WiFi HotSpot Creator ले तपाईंलाई कम्प्युटर, ल्यापटप वा ट्याब्लेटलाई पहुँच बिन्दुको रूपमा प्रयोग गर्न, इन्टरनेट वितरण गर्न, फाइलहरू साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं Windows, Android, iOS को लागि WiFi HotSpot Creator नि:शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनुप्रयोग NET Frameworkk4प्लेटफर्ममा आधारित छ। अनुप्रयोगहरू WPA2 सुरक्षा प्रोटोकल...
तपाईंलाई सजिलैसँग विभिन्न प्रोक्सी सर्भरहरू बीच स्विच गर्न अनुमति दिन्छ। स्विच गर्नु अघि, तपाइँ सर्भरको गति, प्रकार र अन्य सूचकहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको आफ्नै सर्भरहरूको सूची सिर्जना गर्नुहोस् र उडानमा एकबाट अर्कोमा स्विच गर्नुहोस्। प्रिमियम प्रोक्सी स्विचरले तपाइँलाई एक क्लिकमा प्रोक्सी प्रयोग सक्षम वा असक्षम गर्न अनुमति दिन्छ।...
ताररहित सञ्जाल वाचर एउटा उपयोगिता जसले ताररहित सञ्जालहरू स्क्यान गर्छ र हाल जडान गरिएका सबै कम्प्युटर र उपकरणहरूको सूची देखाउँछ। प्रत्येक पत्ता लगाइएको यन्त्रको लागि, आईपी र म्याक ठेगाना, निर्माताको कम्पनीको नाम, र कम्प्युटर नाम जस्ता जानकारी प्रदर्शित हुन्छ। नतिजा सूची HTML, XML, CSV वा पाठ फाइलमा निर्यात गर्न सकिन्छ, र यसलाई...
Easy Hide IP एउटा कम्प्याक्ट र सरल कार्यक्रम हो जसले तपाईंलाई आफ्नो वास्तविक IP ठेगाना परिवर्तन गर्न मद्दत गर्नेछ। कार्यक्रमले संसारभरि छरिएका 50 भन्दा बढी निजी सर्भरहरू प्रयोग गर्दछ र तपाईंलाई अवरुद्ध साइटहरू पहुँच गर्न र ट्राफिक रिडिरेक्ट गर्न अनुमति दिन्छ। Easy Hide IP को साथ तपाईको IP ठेगाना परिवर्तन गर्न धेरै सजिलो छ र केहि...
अल्ट्रा कोर प्रोटेक्टर एक नि: शुल्क ग्राहक-सर्भर कार्यक्रम हो जसले सर्भरलाई बेईमान खेलाडीहरूबाट जोगाउँछ। अवसरहरू: खेल फाइलहरूको परिमार्जन र प्रतिस्थापन विरुद्ध सुरक्षा। खेल प्रक्रियाको परिचय र परिवर्तन विरुद्ध सुरक्षा। स्क्रिप्ट चीट्स को प्रयोग विरुद्ध सुरक्षा। अद्वितीय पीसी आईडी द्वारा प्रणाली प्रतिबन्ध गर्नुहोस्। ग्राहक भाग को अर्ध...
डाटाबेसहरूसँग तपाईंको कामलाई अनुकूलन गर्नको लागि, हामी MySQL समुदाय सर्भर डाउनलोड गर्न सिफारिस गर्दछौं। अनुप्रयोगले खुला पहुँच कोड समावेश गर्दछ, जसले तपाईंलाई कार्यक्रमलाई परिष्कृत गर्न र विशेष गतिविधिको विवरणहरूसँग मेल खाने नयाँ विकल्पहरू परिचय गर्न अनुमति दिन्छ। Windows को लागि MySQL समुदाय सर्भर। यो केवल अनुभवी प्रोग्रामरहरूका लागि...
कुरियर मेल सर्भर अफिस र गृह नेटवर्कहरूको लागि मेल सर्भर हो। कम्प्याक्ट, सेटअप गर्न र सञ्चालन गर्न सजिलो, वेब र SOCKS सर्भरहरू समावेश गर्दछ। यसले तपाईंलाई स्थानीय नेटवर्क र इन्टरनेटमा इ-मेलको आदानप्रदानलाई द्रुत रूपमा व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्नेछ। मुख्य विशेषताहरु: - SMTP र POP3 सेवाहरू - PHP र Perl समर्थनको साथ वेब सर्भर (HTTP सेवा) -...
इन्टरनेट टिभी प्लेयर-७ एउटा कार्यक्रम हो जसले तपाइँलाई तपाइँको कम्प्युटरमा टिभि च्यानलहरू हेर्न र रेडियो सुन्न अनुमति दिन्छ। यसमा तपाईले विभिन्न देशहरू (रूस, फ्रान्स, चेक गणतन्त्र, बुल्गेरिया, आदि) बाट 150 भन्दा बढी च्यानलहरू फेला पार्नुहुनेछ र तपाइँ तिनीहरूलाई तपाइँको कम्प्युटरमा निःशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईंलाई आवश्यक च्यानल...
उन्नत डिस्क क्लीनर तपाईको कम्प्युटरमा काम गर्दा जम्मा भएका तपाईको हार्ड ड्राइभबाट जंक र अस्थायी फाईलहरू हटाउने कार्यक्रम हो। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कम्प्युटर सफा गर्ने दुई तरिकाहरू प्रदान गर्दछ: फाइलहरू पूर्ण रूपमा मेटाउने वा तिनीहरूलाई निर्दिष्ट डाइरेक्टरीमा सार्ने। उन्नत डिस्क क्लीनरले हार्ड ड्राइभहरू स्क्यान गर्दछ र फेला परेका जंक...
ल्यान्टर्न एक सरल र प्रभावकारी अनुप्रयोग हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना इन्टरनेटमा कुनै पनि जानकारी पहुँच गर्न, साथै प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको सुरक्षा गर्न मद्दत गर्दछ। कार्यक्रम सेटअप गर्न सजिलो र छिटो छ, तर तपाइँसँग यसलाई प्रयोग गर्नको लागि तपाइँको कम्प्युटरमा Google Chrome वेब ब्राउजर हुनु आवश्यक छ। उच्च गति।...
LUXVPN - यो Vk अनलक गर्नु अघिको कुरा हो, सहपाठीहरूसँग केही चरणहरू बाँकी छन्। कुनै जटिल सेटिङहरू वा बहु-स्तर इन्टरफेसहरू छैनन् - LUX VPN सँग, VPN स्थापना गर्नु एक हावा हो! केवल हाम्रो कार्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस्, चलाउनुहोस् र यो हो! यस पृष्ठमा तपाइँ LUX VPN ग्राहक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्थापना गर्न र यसको साथ आफ्नो कम्प्युटर...
Solo VPN एक नि:शुल्क iOS अनुप्रयोग हो जसले उच्च-गति र सुरक्षित इन्टरनेट पहुँच प्रदान गर्दछ, साथै वेबमा पूर्ण अज्ञातता। सोलो VPN कार्यक्रमको बारेमा ध्यान दिन लायक पहिलो कुरा एक सुरक्षित सर्भरमा धेरै सुविधाजनक र छिटो जडान हो। यसको लागि आवश्यक सबै भनेको एउटा बटन थिच्नु हो जुन कार्यक्रम सुरु गरेपछि तपाईंको मोबाइल उपकरणको स्क्रिनमा देखा...
hide.me VPN विन्डोज कम्प्युटरहरूको लागि VPN क्लाइन्ट हो जसले तपाइँलाई तपाइँको अनलाइन गोपनीयता सुरक्षित गर्न र तपाइँको वास्तविक पहिचान लुकाउन मद्दत गर्दछ, सबै सित्तैमा। सायद अनुप्रयोगको मुख्य विशेषताहरू मध्ये एक प्रस्तावित सुरक्षाका सबै फाइदाहरू निःशुल्क प्रयोग गर्ने क्षमता हो। स्थापना पछि, कार्यक्रमले तपाईंलाई 500 MB ट्राफिक निःशुल्क...
Speedify एउटा उपयोगिता हो जसको मुख्य कार्य तपाईको इन्टरनेट जडानको गति बढाउनु हो। यसले WiFi, DSL, इथरनेट र 3G/4G लगायत तपाईंका लागि उपलब्ध सबै सञ्चार च्यानलहरूलाई थप स्थिर च्यानलमा जोड्दछ। Speedify ले सबै उपलब्ध जडानहरू पहिचान गर्छ र स्वचालित रूपमा विलम्बता र उपलब्धताको आधारमा द्रुत सर्भर चयन गर्दछ। र कार्यक्रमलाई कुनै पनि अतिरिक्त...
Hola एउटा अनुप्रयोग हो जसले तपाईंलाई क्षेत्रीय प्रतिबन्धहरू बाइपास गर्न अनुमति दिनेछ। यदि पहुँच देश भित्र मात्र अनुमति दिइएको छ (ग्रेट ब्रिटेन, राज्यहरू), त्यसपछि अर्को राज्यका प्रयोगकर्ताले भिडियो सामग्री हेर्न Hola डाउनलोड गर्न सक्छन्। कार्यक्रम स्थापना र प्रयोग गर्न सजिलो छ। अनुप्रयोगले फाइल वा कागजातहरूसँग काम गर्दैन। सामान्यतया...
स्वचालित रूपमा निदान गर्न र अपरेटिङ सिस्टमसँग समस्याहरू समाधान गर्न र तपाईंको कम्प्युटरलाई अप्टिमाइज गर्न, हामी प्रणाली मेकानिक डाउनलोड गर्न सिफारिस गर्छौं। एउटा नि:शुल्क सफ्टवेयर इजाजतपत्रले तपाईंलाई प्रणाली मेकानिक नि:शुल्क डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। Windows XP, 7, 8, 10 को बिट गहिराई x32, x64 को लागि प्रणाली मेकानिक द्वारा सिर्जना...
अवास्ट प्रो एन्टिभाइरस एक विश्वव्यापी पूर्ण-विशेष प्रिमियम एन्टिभाइरस हो जसले भाइरसको सम्भावित संक्रमण र खतरनाक वस्तुहरूबाट हुने अन्य खतराहरू विरुद्ध उच्च स्तरको कम्प्युटर सुरक्षा प्रदान गर्दछ। एन्टिभाइरस सफ्टवेयरको मुख्य कार्य भनेको प्रणाली स्क्यानिङ, भाइरस र संक्रमित वस्तुहरू पत्ता लगाउने वा निको पार्नु पर्ने आवश्यकताहरू सहितको व्यापक...
PHOTOclicker ले लोकप्रिय प्रतियोगिताहरूमा भोट गर्ने र PhotoCountry वेबसाइटमा भोट गर्ने प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउँछ, प्रयोगकर्तालाई आफ्नो कम्प्युटरमा निरन्तर रहन आवश्यक नपर्ने। यो फोटो देशमा तपाईंको व्यक्तिगत पृष्ठलाई बढावा दिन, तपाईंको मूल्याङ्कन, स्थिति, लाइक, छाप, भोट, सहानुभूति, चुम्बन, उपहार, अतिथि र साथीहरू, साथै फोटो देश...
Office Password Recovery Wizard Microsoft Office कागजातहरू - MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Access र VBA परियोजनाहरूका लागि पासवर्डहरू पुन: प्राप्ति/मेटाउने कार्यक्रम हो। यसलाई Word Excel कागजातहरू डिक्रिप्ट गर्ने पूर्ण रूपमा नयाँ अवधारणाद्वारा धेरै समान कार्यक्रमहरूबाट अलग गरिएको छ। यदि सबै अन्य प्रोग्रामहरूले प्रयोगकर्ताको...
मोजिला फायरफक्स पोर्टेबल मोजिला फायरफक्स ब्राउजरको पोर्टेबल संस्करण हो, जसमा खुला स्रोत, धेरै संख्यामा सेटिङहरू र विस्तारहरू छन्। ब्राउजर विकासकर्ता Mozilla Corporation द्वारा नि:शुल्क वितरण गरिएको छ। अनुप्रयोगले रूसी भाषालाई समर्थन गर्दछ, पोर्टेबल उपकरणहरू (फ्ल्यास ड्राइभ वा सीडी) बाट चल्छ, र विन्डोजसँग पनि उपयुक्त छ। कार्यक्रम पूर्ण...
जुमा डिलक्स एक प्रसिद्ध आर्केड खेल हो। खेलको उद्देश्य भनेको बलहरू पुग्नु अघि गोल्डेन स्कलको दिशामा स्क्रिनको साथ चेनमा चल्ने सबै रंगीन बलहरूलाई नष्ट गर्न भ्यागुता प्रयोग गर्नु हो। भ्यागुताले तपाईंलाई विभिन्न रंगका बलहरू शूट गर्न अनुमति दिन्छ। एउटै रङको बलको चेन (तीन वा बढी टुक्राहरू) एउटै रङको बलले प्रहार गर्दा विस्फोट हुन्छ।...
गेम बूस्टर एक शक्तिशाली कार्यक्रम हो जसले केही अपरेटिङ सिस्टम सेटिङहरूलाई अप्टिमाइज गर्छ, जसले तपाईंलाई आधुनिक खेलहरूमा आफ्नो कम्प्युटरको कार्यसम्पादन सुधार गर्न अनुमति दिन्छ। गेम बूस्टरलाई धन्यवाद, केवल एक क्लिकमा तपाइँ कुनै पनि आधुनिक खेलहरू चलाउनको लागि तपाइँको कम्प्युटरलाई अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। गेम बूस्टरले सबै स्थापित ड्राइभरहरू...
Aurabi Intro Microsoft टर्मिनल सत्रमा प्रयोगको लागि एउटा कार्यक्रम हो। तपाईंको कम्पनीको सुरक्षा बढाउँछ र तपाईंलाई प्रभावकारी रूपमा विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच अधिकारहरू फरक गर्न अनुमति दिन्छ। आज, धेरै कम्पनीहरूले सर्भरमा टर्मिनल पहुँच प्रयोग गर्छन् र माइक्रोसफ्ट टर्मिनल सर्भर वातावरणमा रिमोट डेस्कटपमा कर्पोरेट सफ्टवेयरसँग काम गर्छन्।...
WebBrowserPassView एउटा कार्यक्रम हो जसले तपाईंलाई बिर्सिएका वेबसाइट पासवर्डहरू पुनःप्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यसले इन्टरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफक्स, गुगल क्रोम, सफारी र ओपेरा सहित सबै भन्दा साधारण वेब ब्राउजरहरूलाई समर्थन गर्दछ। WebBrowserPassView ले कुनै पनि वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, आदिबाट पासवर्डहरू पुनःप्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।...
YUMI - Multiboot USB Creator - यदि तपाइँ multiboot USB फ्लैश ड्राइवहरू सिर्जना गर्ने क्षमता खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ YUMI - Multiboot USB सिर्जनाकर्ता डाउनलोड गर्नुपर्छ। कार्यक्रमले तपाईंलाई OS वितरण, एन्टिभाइरसहरू र निदान कार्यहरूको साथ उपयोगिताहरूको साथ विश्वव्यापी फ्ल्यास ड्राइभहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। हार्ड डिस्कबाट छवि...
फास्ट फाइल इन्क्रिप्टर - यो कार्यक्रम धेरै ठूला फाइलहरू द्रुत रूपमा इन्क्रिप्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईंलाई फाइलहरू, फोल्डर सामग्रीहरू इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट गर्न अनुमति दिन्छ, र धेरै अतिरिक्त उपकरणहरू समावेश गर्दछ। फास्ट फाइल एन्क्रिप्टरले सबै कार्यहरूको बारेमा विस्तृत सन्देशहरू सहित लचिलो प्रयोगकर्ता इन्टरफेस समावेश गर्दछ। ठूला...
नेटवर्क सुरक्षा अडिटिङ एक शक्तिशाली, बहुमुखी उपयोगिता हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई ल्यान सुरक्षा स्क्यानिङ, निगरानी र लेखा परीक्षणका लागि ४५ भन्दा बढी उपकरणहरू प्रदान गर्दछ। स्थानीय नेटवर्कमा विभिन्न कमजोरीहरूको पहिचान; शक्तिशाली नेटवर्क निगरानी र नियन्त्रण उपकरणहरू; सबै नेटवर्क नोडहरूको बारेमा विस्तृत जानकारीको विश्लेषण र सङ्कलन;...
मास्क सर्फ प्रो ओपन टेक्नोलोजी टोर (द ओनियन राउटर) मा आधारित एक प्रयोग गर्न-गर्न-सजिलो इन्टरनेट बेनामी सफ्टवेयर हो। मास्क सर्फ प्रो आजको मितिमा, कसैले पनि गुमनामको लागि उपकरणको अभावको बारेमा गुनासो गर्दैन। त्यहाँ धेरै आउट-अफ-द-बक्स समाधानहरू छन् जुन नेटवर्क स्तरमा प्रणाली प्रशासकहरूद्वारा स्थापित छन्। यद्यपि, त्यस्ता सुरक्षा उपकरणहरूलाई...
HitmanPro एउटा प्रोग्राम हो जसले तपाइँको कम्प्युटरलाई भाइरस, ट्रोजन, स्पाइवेयर र तपाइँले सामना गर्न सक्ने अन्य प्रकारको मालवेयरबाट जोगाउँछ। यो कार्यक्रमले तपाईंलाई समयमै मालवेयर पत्ता लगाउन र हटाउन मद्दत गर्नेछ। कार्यक्रमले क्लाउड टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ र एकैचोटि धेरै एन्टिभाइरस इन्जिनहरू प्रयोग गर्दछ, प्रणालीमा कुनै पनि सम्भावित खतरनाक...
नि: शुल्क फाइल क्यामोफ्लाज एक प्रोग्राम हो जसले तपाईंलाई जेपीईजी फाइल भित्र कुनै पनि प्रकारको डाटा लुकाउन अनुमति दिन्छ। फाइलहरू लुकाउन, तपाइँ प्रोग्राम इन्टरफेस वा Windows Explorer मेनु वस्तु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: पठाउनुहोस् - नि: शुल्क फाइल क्यामफ्लाज। सबै भण्डारण गरिएका फाइलहरू छेडछाड-प्रतिरोधी AES एल्गोरिदमसँग इन्क्रिप्ट गरिएका छन्...
USB शिल्ड - USB ड्राइभहरूमा भाइरसहरूको बारेमा धेरै भनिएको छ। तर, यो बाहिर निस्कियो, धेरै भनिएको थिएन... सानो होइन, तर सम्भवतः आधुनिक कम्प्युटर भाइरसहरूको ठूलो भाग USB-ड्राइभमा स्थानान्तरण गरिएको छ। धेरै भाइरसहरू हटाउन सकिने उपकरणहरू मार्फत फैलाउनको लागि विशेष रूपमा लेखिएका छन्। यो कार्यक्रम फ्ल्यास ड्राइभबाट परजीवीहरू विरुद्ध ढाल भन्दा...